အန်းဒရွိုက်အပေါ် CACHE ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ - အန်းဒရွိုက် - 2019
Android အတွက်ဂိမ်းများအတွက် cache ကိုသတ်မှတ်ရန်
news feed, မည်သည့်အသုံးပြုသူတိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ယက် Odnoklassniki စာမျက်နှာပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရင်းအမြစ်များ၏ကျယ်ပြန့်မျက်နှာတရာယူသမျှသောဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာအသုံးပြုသူရုပ်ရှင်မလိုအပ်သောနှင့်သူ့အဘို့စိတ်မဝင်စားသတိပေးချက်တွေအများကြီးထဲမှာတူသောမပြုစေခြင်းငှါ။ ဒါကြောင့်အဆင်ပြေနှင့်သာယာသောဖြစ်ခဲ့သည်သုံးစွဲဖို့ဒါမှငါသည်သင်တို့၏စာမျက်နှာပေါ် RSS feed ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်သလား?
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်တိပ်ညှိနှိုင်းမှုသတင်းစေရန်အတူတကွကြိုးစားကြည့်ကြကုန်အံ့။ မဒါအများကြီးဒီမှာခဲဖြစ်နိုင်နှင့်အခက်အခဲများပေါ်ထွန်းသင့်ပါတယ်, ဤ parameters တွေကိုများတွင်ချည်နှောင်ခြင်းကို။
အဆင့် 1: အနှစ်သက်ဆုံးရန်နောက်ထပ် Add
Tab ကို - သတင်းအစာကျွေးခြင်းအတွက်အလွန်အသုံး attribute ကိုလည်းမရှိ "အနှစ်သက်ဆုံး"။ ဒီအကသင်အဘို့ကိုသာသက်ဆိုင်ရာမျှဝေစောင့်ကြည့်ဖို့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုလုံးကိုစီးဆင်းမှုအဘို့အသီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာတင်ထားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
တစ်ဘရောက်ဇာကို odnoklassniki.ru အတွက် site ကိုဖွင့်ပါ, သတင်းစာကျွေး၏ထိပ်၌, လုပ်ပိုင်ခွင့်သည်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ "အနှစ်သက်ဆုံး".
tab ကို "အနှစ်သက်ဆုံး" သင်၏မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်သတင်းထပ်ထည့်ဖို့အပေါငျးလက်ခဏာနဲ့လူ့ silhouette ၏ပုံစံအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သူငယ်ချင်းစာရင်းထဲကနေကျနော်တို့ကအပိုင်းအတွက်ကိုစောငျ့ရှောကျခငျြသောလုပ်ရပ်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရွေးချယ်ပါ "အနှစ်သက်ဆုံး" မိမိအခါးပတ်။ ကျနော်တို့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကိုယ်စားပြုပုံပေါ် sprocket ပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်တို့ရှိသမျှသည်သတင်းစီးဆင်းမှုအတွက်မိတ်ဆွေများကိုရှိသည်ဖြစ်ရပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကြိုးစားရန်မလိုအပ်ရှိပါသည်။ ရုံ tab ကိုသွားပါ "အနှစ်သက်ဆုံး" နှင့်အလွန်အဆင်ပြေသဘောတူလတံ့သော filtered အကြောင်းကြားစာကိုကြည့်ပါ။
အဆင့် 2: မိတ်ဆွေတစ်ဦးထံမှဖြစ်ရပ် Hide
တစ်ခါတစ်ရံလူများ, Odnoklassniki ၌အကြှနျုပျတို့၏မိတ်ဆွေစာရင်းထဲ၌ရှိကြ၏ကျွန်တော်တို့ကို action ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်, သင်တန်း, ဒီအပေါငျးတို့သဖဲကြိုးအပေါ်ပြသသူ။ သင်တို့သည်ဤဖြစ်ရပ်များဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။
အခြားအကြောင်းကြားစာကျနော်တို့မြင်ချင်ကြဘူးသောအဖြစ်အပျက်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေသည့် Newswires အတွက်သင့်စာမျက်နှာကိုဖွင့်။ သတင်းအပိုင်းမှာတော့အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာတစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပုံစံအတွက် button ကို click "ဟုအဆိုပါတိပ်ခွေကနေအဖြစ်အပျက်ကို Remove".
ရွေးချယ်ထားသောအဖြစ်အပျက်က hidden ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ကျနော်တို့က box ထဲမှာတစ်ဦးကို tick ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် "ဒါများနှင့်ဒါဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆွေးနွေးမှုအပေါငျးတို့သဖုံးကွယ်ရန်အတွက်".
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Confirm" နှင့်ဤမိတျဆှေမြားမှသတငျးအခကျြမရှိတော့သည်သင်၏တိပ်ခုံဖိနပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် 3: အုပ်စုထဲမှာဖျောက်ထားခြင်းဖြစ်ရပ်များ
သငျသညျစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်ရာမှတစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းသတိပေးချက်ထဲမှာအဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ပါချခါးပတ်ပေါ်ရွေ့လျားခြင်း, home page ကိုသွားပါ။ အဆင့်2နှင့်အတူတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ထောင့်က X ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ရလဒ် window ထဲတွင်ငါတို့သည်သင်တို့၏လုပ်ရပ်များအတည်ပြုခြင်းနှင့်သင်တိပ်ခွေထဲကနေပျောက်ကွယ်သွားရပ်ရွာမှသတိပေးချက်များမလိုအပ်ပါဘူး။
သင်သည်မည်သည့်အချိန်ချင်လျှင်သင်သည်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူနှင့်ယခင်ကတိပ်များ၏အသုံးပြုသူထံမှဝှက်ထားကြသည်ဟုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဖြစ်ရပ်များ၏ display ကို restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
အဆိုပါကိုယ်ပွားမှလာမယ့်, အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာသင့်စာမျက်နှာကိုသွားပါ, ကျွန်တော်တစ်ဦးတြိဂံ၏ပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာသေးငယ်တဲ့ icon ကိုမြင်ရကြ၏။ drop-menu မှာက LMB ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, အကို select လုပ်ပါ "ပြောင်းလဲခြင်း Settings" ကို.
အဆိုပါ settings စာမျက်နှာတွင်ကျနော်တို့ယူနစ်ဂရုမစိုက် "Lenta ထံမှ Hidden".
ကျွန်တော်တို့သည်ဥပမာအားဖြင့် tab ကိုရှေးခယျြ "လူတွေက"။ ကျွန်တော်တို့ဟာခလုတ်ကိုဓာတ်ပုံကလစ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာနောက်တဖန်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြရာ၏သတင်းများ, အသုံးပြုသူရဲ့ကိုယ်ပွားပေါ်တွင် mouse ကိုညွှန်ကြား "က hidden မှဖယ်ရှားရန်" လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပုံစံ။
နောက်ဆုံးတော့သည်သူ၏လူ့တိပ်မှပြန်လာ, ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌တည်၏။ Done!
အခြေခံအားဖြင့်, ကသင့်ရဲ့သတင်းကိုအစာကျွေးခြင်းအပေါငျးတို့သဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေခံ setup ကိုပါပဲ။ လိုအပ်ချက်များပြုလုပ်ခြင်းဒီရိုးရှင်းတဲ့ခြေလှမ်းများကိုသင်သိသိသာသာမလိုအပ်သော၏နံပါတ်လျှော့ချရန်နှင့် Odnoklassniki အပေါ်သူ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သင်တို့ကို uninteresting ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဆက်သွယ်ရေးဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အပျြောအပါးကိုဆောင် ခဲ့. သင့်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အတိပ် Odnoklassniki ပျော်စေ